Aikido က တကယ်ပဲ စွမ်းသလား ?!!!! - JAPO Japanese News
ဂါ 02 Jun 2020, 15:10 ညနေ
Aikido အာကီဒို ဆိုတာကို သိကြပါသလား?
အရင်ဆုံး ဒီဗီဒီယိုကို ကြည့်လိုက်ပါနော်။
သူတို့ကိုကြည့်ရတာ ကခုန်နေကြသလိုပဲ။ ပေါ့ပေါ့ကလေးနဲ့ လေပေါ်ဝဲအောင် ကိုင်ပေါက်ပစ်လိုက်တာ။
ကိုင်ပေါက်ခံရတဲ့သူရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာက ပိုပြီးတောင် တောင့်တောင့်တင်းတင်းရှိပြီး ကိုက်ပေါက်တဲ့သူကလည်း အားထည့်ပြီး ကိုင်ပေါက်တဲ့ပုံတောင် မပေါ်ဘူးနော်။
ဒါ တမင်သက်သက် လေပေါ်မြောက်သွားအောင် လုပ်ပြတာမလားလို့ ထင်တဲ့သူတွေ တော်တော်များများရှိတယ်ထင်ပါတယ်။
အဲလိုထင်တဲ့သူတွေကတော့ ဒီ ဗီဒီယို ကို ကြည့်လိုက်ပါနော်။
မစ္စတာ Gozo Shioda ရဲ့ သရုပ်ပြမှုတစ်ခုကို မြင်ခဲ့တဲ့ ကနေဒီ (နောက်ပိုင်းသမ္မတဖြစ်လာသည်) ကတော့ သူ့ရဲ့ ခွန်အားကိုမယုံကြည်ဘဲ သက်တော်စောင့်တွေကို တိုက်ခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အမေရိကားရဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့ တကယ့်ကြီးမားတဲ့ အင်အားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ယောကျ်ားလေးများကို ကလေးအရွယ်သာသာထင်ရတဲ့ အမြင့် 154 စင်တီမီတာ, ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 45 ကီလိုဂရမ် နဲ့ Mr. Shioda က တကယ်ပဲ တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာလား?
ကိုယ်ရံတော်တွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်က သူ့ထက်နှစ်ဆပိုများပါတယ်။
ဒါကိုယုံနိုင်ပါ့မလား ?ပြိုင်ဘက်အများအပြားရှိ / မရှိဆိုသည်မှာအရေးမကြီးပါဘူး။
ဒါကို တီထွင်ခဲ့တဲ့သူကတော့ Mr. Morihei Ueshiba ပါ။
၁၈၈၃ခုနှစ် တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ ကိုယ်ခံသိုင်းပညာအတွက်ကတော့ ရှည်လျားတဲ့သမိုင်းကြောင်းမရှိပါဘူး။
သူ့မြေးရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခုတော့ ကျန်နေပါသေးတယ်။
ဒီလို စက်ဝိုင်းပုံစံ လှုပ်ရှားမှုကတော့ Aikido ကိုယ်ခံပညာရဲ့ အဓိကလက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
အင်အား ကို အင်အား နဲ့ ပြန်ပြီး တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘဲ
တဖက်လူ ပြိုင်ဘက်ရဲ့ အင်အား ကိုသာ အသုံးပြုပြီး ပစ်ပေါက်တာပါ။
တဖက်လူ ပြိုင်ဘက်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုနှင့် အတူ ကိုယ့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပါ တစ်သားတည်း ဖြစ်လာစေတဲ့ ကိုယ်ခံပညာပါ။
ဒါကို “ သဟဇာတစိတ်ဝိညာဉ်” လို့ ခေါ်ပြီး ဒီပညာရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အရာလို့ ဟုဆိုကြပါတယ်။
ဒီလို စိတ်ကူးနဲ့ အတွေးအားလုံးက လှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာ ရှိနေလို့ Aikido ကိုယ်ခံပညာက ရန်သူတွေကို တိုက်ခိုက်ရန် အနိုင်ယူရန် ကြိုးစားရတဲ့ အမုန်းပွားရတဲ့ ကိုယ်ခံပညာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ကမ္ဘာကြီးကို သဟဇာတဖြစ်စေဖို့နဲ့ ဒါဟာ လူသားမျိုးနွယ်တွေအပေါ် အားလုံးကို တစ်သွေးတစ်သားတည်း မိသားစု ဖြစ်စေတဲ့ လမ်းစဉ်တစ်ခုပါလို့ Ueshiba ဆိုတဲ့ တည်ထောင်သူကုမ္ပဏီက ပြောထားပါတယ်။
အဲဒီအတွက် အခြားတစ်ဖက်လူရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို နားလည်စေရန်
Dojo ဒိုဂျို မှာ ဘယ်လို ‌တစ်သားတည်းဖြစ်အောင် ရောစပ်ရမလဲဆိုတာ သင်ယူလေ့လာပြီး
လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာလည်း အတွေးအခေါ်ကောင်းတွေရစေဖို့ ဖော်‌ဆောင်ပေးတဲ့ အထောက်အပံ့ပေးတွေလည်း ပေးပါတယ်။
စကားမစပ်, Aikido မှာ hakama ကို ဝတ်ဆင်ပါတယ်။Hakama ဆိုတာက စကတ်အရှည်လိုမျိုးပုံစံရှိပြီး ဂျူဒို ဘောင်းဘီပုံစံနှင့် ကွဲပြားပါတယ်။
အလားတူအရာများကို Kendo တွင်လည်းသုံးပါတယ်။
ဒါကဘာလဲဆိုတော့ . . .
ခန္ဓာကိုယ်သေးငယ်သူဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတဲ့ ပြိုင်ဘက်ရဲ့ အင်အားကို အသုံးပြုပြီး ပစ်လှဲဖို့အတွက် ဒူးခေါင်း ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုက အရေးကြီးလို့ပါတဲ့။ဒီလှုပ်ရှားမှုကို တစ်ဖက်လူ မမြင်ရစေရန် Hakama ကို ဝတ်ဆင်တာပါ။
Kendo မှာ လည်း ဒူးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုက အရေးကြီးလို့ ဒီလိုဝတ်ဆင်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကို နားမလည် မသိနိုင်အောင် Hakama စတိုင်လ်တစ်ခုအနေနဲ့ ဖြစ်လာတာပါ။
ရူပဗေဒကို စိတ်ဝင်စားသူတွေ အနေနဲ့ကတော့ အနီးကပ်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ၎င်းကို သိရှိနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဒါဟာ မက္ကင်းနစ် ရဲ့ လျှောက်လွှာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ဘက်ရဲ့ အားကို ကောင်းစွာအသုံးပြုဖို့ ကိုယ့်ရဲ့ စွမ်းအားကို အနည်းဆုံးသုံးတာ ကောင်းပါတယ်။
ဒါကြောင့် Shiota ကဲ့သို့သော လူငယ်တစ်ဦး က သူ့နှစ်ဆထက်ပိုနဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ပစ်ပေါက်နိုင်ပါတာပါ။
Aikido က အခြေခံအားဖြင့် ပြိုင်ပွဲဆိုပြီး မထားထားပါဘူး။
အဲဒီအကြောင်းကြောင့် လက်တွေ့မကျဘူး လို့ ပြောခံရတာမျိုးရှိတာတောင်မှ Metropolitan ရဲဌာနမှာ
မွေးစားထားသည့်အတိုင်း ဒါကို အပြည့်အဝကျင့်သုံးနိုင်ပါတယ်။
သင်ရော Aikido ရဲ့ အစွမ်းကို ယုံလား ?
ဆာမူရိုင်းများ ဒိုင်းကာကို မသုံးတဲ့အကြောင်းအရင်း?
Nara စီရင်စုရှိ အမြင့်ဆုံးအဆောက်အဦးက လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၁၀၀၀ နီးပါးကအပျက်အယွင်းတွေထဲက! ?
တိုကျိုမြို့ (၃) ရက်နေ့ အသစ်ကူးစက်သူ ၂၁၁ ဦး အတည်ပြု !!!!
(၂၃) ရက်နေ့ တစ်နိုင်ငံလုံးကူးစက်မှု ၃၂၆၇ ဦးရှိပြီး၊ သေဆုံးသူ ၅၆ ဦးရှိ